ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာ
Posted by Zaw Wonna on Sep 17, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |6comments
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် လှပသော အရာတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသော အရာတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အား ပြင်းထန်စွာ နာကျင်စေသောအခါ သင့်အနေနှင့် အာဃာတတရားကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အလွန်ပင် ခဲယဉ်းပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေမည် ဖြစ်၏။
ခွင့်လွှတ်တတ်သော သူများသည် စိတ်ဓါတ်ကျမှု၊ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်မှု၊ စိတ်တင်းကျပ်မှု နည်းပါးပြီး ပိုမို၍ အလားအလာကောင်းသော သူများ ဖြစ်ကြပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ကျန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေကာ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟု “Forgive for Good” စာအုပ်ကို ရေးသားသူ ပါရဂူ “Frederic Luskin” က ပြောကြားခဲ့သည်။
“Luskin” က အောက်ပါအချက်များကို အကြံပြုထားပါသည်။
တည်ငြိမ်မှုရစေရန် ပြုလုပ်ပါ။ ။ ဒေါသဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းကို အသုံးချပါ။ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီး သင့်အား ကြည်နူးမှု ဖြစ်စေမည့် သဘာဝ အလှအပတစ်ခု သို့မဟုတ် သင်ချစ်သော တစ်စုံတစ်ယောက် အကြောင်းကို တွေးတောပါ။
တောင်းပန်မှုကို စောင့်မနေပါနှင့်။ ။ များသောအားဖြင့် သင့်အား ထိခိုက်နာကျင်အောင် ပြုလုပ်သူတို့သည် ပြန်လည် တောင်းပန်ရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိတတ်ပေ။ သူတို့ အနေနှင့် သင့်အား နာကျင်စေလိုခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အမြင်နှင့် မတူခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် သူတို့၏ တောင်းပန်မှုကို စောင့်စားခြင်းသည် စိတ်မသက်သာဖွယ် ရှည်လျားလှသော ကာလတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် သင့်အား ထိခိုက်စေသူနှင့် စေ့စပ်ပြေလည်မှု သို့မဟုတ် သူ၏ ခွင့်လွှတ်မှု တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း သင့်အနေနှင့် သိထားပါ။
သင့်အား နာကျင်စေသူအကြောင်း မတွေးပါနှင့်။ ။ သင့်နာကျင်မှုကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည် တွေးတောခြင်းသည် သင့်အားနာကျင်စေသူအား အင်အား တိုးပွားစေသည်။ သင်၏နာကျင်သော ခံစားချက်များကို တွေးတောမည့်အစား သင့်အနားမှ အလှအပနှင့် အကြင်နာများ အကြောင်း စဉ်းစားကာ အချစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။
အခြားသူဘက်မှ မြင်တတ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ။ အကယ်၍ သင့်အနေနှင့် သူ၏ အမြင်နှင့် ထပ်တူခံစားကြည့်ပါက သူ၏ မသိနားမလည်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ အချစ်တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိမြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ထပ်တူညီသော အမြင် ရရှိရန်အတွက် သင့်အား နာကျင်စေသူ၏ အမြင်နှင့် သင့်ကိုယ်သင် စာတစ်စောင် ရေးပါ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ အကျိုးကို အသိအမှတ်ပြုပါ။ ။ သုတေသန ပြုချက်များအရ ခွင့်လွှတ်တတ်သော သူများသည် ပိုမို စွမ်းအားရှိခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် အိပ်စက်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်း သိရသည်။
သင့်ကိုယ်သင် ခွင့်လွှတ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ ။ အချို့သောသူများအတွက် မိမိကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နေတတ်သည်။ သို့သော် ထိုအချက်ကို မကြိုးစားပါက သင်၏ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်ပေလိမ့်မည်။ ။
Source Article: Let go of your grudge for better health
တည်ငြိမ်မှုရစေရန် ပြုလုပ်ပါ။ ။ ဒေါသဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းကို အသုံးချပါ။ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီး သင့်အား ကြည်နူးမှု ဖြစ်စေမည့် သဘာဝ အလှအပတစ်ခု သို့မဟုတ် သင်ချစ်သော တစ်စုံတစ်ယောက် အကြောင်းကို တွေးတောပါ။ . . . ဒေါသထွက်နေရင် အားလုံးကိုမုန်းနေတော့တာပဲ . . . ဘယ်လိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး . . .
အရမ်းကောင်းတဲ့ post လေးပါဗျာ
အရမ်းကောင်းတဲ့ စာစုလေးပါပဲ .. လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ …ဒါပေမဲ့ ဒေါသထွက်လာရင် အဲလိုလုပ်ဖို့ကိုမေ့သွားတက်တယ်လေ ….
ဒေါသထွက်နေတုန်းမှာတော့ ဒေါသကို ငြိမ်းအောင် အရင်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ အာဃာတ တရားကို ငြိမ်းအေးစေတာမျိုးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ကျနော်တို့ တတွေခွင့်လွှတ်နိုင်ကြရင် မိမိ အပါအ၀င် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့။
It’s the most difficult thing to do . I can’t do it because I’m justayouth . Ask for me , yes , revenge is so sweet .